Caruur Ku Geeriyootay Dagmada Cabudwaaq Ee Waqooyiga Gobalka Galgaduud – Goobjoog News
in Galmudug, Wararka Dalka
Sedex caruur ah ayaa ku geeriyootay dagmada Cabdwaaq ee waqooyiga Galgaduud, ka dib markii ay ku qarqoomeen Barkad ay u aadeen in ay ku soo dabaashaan.
Geerida Caruurta timid ka dib markii mid ka mid ah uu is ku dayay inuu biyaha galo si uu ugu dabaasho waxa uuna ku qarqoomay Biyahii, labadii caruur ee kale ayaa isku dayay inay ka soo saaraan biyaha sidaas ayeeyna ugu wada dhaceen Barkadda.
Mahad Bashiir oo ah adeerka sedexda caruurta ah ee geeriyootay ayaa sheegay inaysan jirin wax shaqo ah oo caruurta looga diray barkadda lakiin ay u aadeen in ay ku dabaashaan oo kaliya, waxa uuna xusay in caruurta geeriyootay ahaayeen hal Wiil iyo labo Gabdhood.
“Barkadda biyo loogama dirin cunugbaa dabaal u galay Gabdhuhuna iney ka soo qabtaan ayeey isku dayeen, ka dib waa ay kuwada dhaceen sidaa ayeeyna isku raaceen wax looga diray majirin”,
Sidoo kale Mahad ayaa sheegay in caruurtu ahaayeen kuwo aad yar marka loo eego biya baaxada ay lahaayeen iyo inaan loogu tala galin ayaga oo kale .
‘”Caruurtu aad ayeey u yaaraayeen Gabarbaa u wey caruurta 15 jir aheyd Wiilkuna waxa uu ahaa 13 sano jir Gabadha u yarna waxa ay aheyd 11 sano jir”
waqityada sidaan oo kale marka Roobabka u da,aan qoys badan ayaa ku waayo caruurtooda ayagoo ku dabaasha biyo aad uga baaxad weyn, taas oo kakeenta in caruurtu ay geeriyoodaan ama dhibaato ka soo gaarto.
Akhriso: Ajendaha Shir Madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka Ee Maka